Fepetra sy fepetra | Visa an-tserasera India
Ireto fehezan-dalàna sy fepetra manaraka ireto, izay misy ny teny hoe "ny mpangataka" sy "ianao" dia manondro ny mpangataka e-Visa karana mitady hameno ny fangatahana e-Visa ho an'i India amin'ny alàlan'ity tranonkala ity sy ireo teny hoe "izahay", "us", " ny ”, ary“ ity tranonkala ity ”dia manondro ny www.indiaonlinevisa.in, natao hiarovana ny tombontsoan'ny tsirairay ara-dalàna. Tokony hanaiky ianao fa amin'ny alàlan'ny fidirana sy fampiasana an'ity tranonkala ity dia namaky, nahatakatra ary nanaiky ireo fepetra sy fepetra ireo ianao. Ny fanaovana izany dia ilaina amin'ny fampiasana ny tranokalanay sy ny serivisy atolotray.
Zava-dehibe ny fahafantaranao fa voaro ny tombontsoan'ny tsirairay avy ary arakaraka ny fahatokisanay ny fifandraisanay aminao. Aza adino fa mila manaiky ireo fepetra momba ny serivisy ireo ianao mba hampiasa ny tranokalanay sy ny serivisy atolotra.
Ny tahiry voaaro amin'ity tranokala ity dia mitahiry sy manoratra ireto fampahalalana manaraka nomen'ny mpampiasa ireto ho toy ny angon-drakitra manokana:
Ny anarana, ny daty sy ny toerana nahaterahana, ny antsipirian'ny pasipaoro, ny data momba ny olana sy ny lany, karazana fanohanana porofo na antontan-taratasy, adiresy an-telefaona sy adiresy, adiresy paositra sy maharitra, mofomamy, antsipirihany informatika teknolojia, firaketana fandoavana, sns.
Ireo data rehetra ireo dia tsy zaraina na ampiharin'ny antoko fahatelo afa-tsy:
Rehefa nifanarahan'ny mpampiasa mazava tsara.
Rehefa miankina aminy ny fitantanana sy ny fikojakojana ny tranokala.
Rehefa takian'ny lalàna na baiko mifehy ara-dalàna ny vaovao.
Rehefa ampandrenesina raha tsy misy ny mombamomba anao manokana dia mora resin'ny fanavakavahana.
Rehefa ny fampahalalana omena dia tokony hampiasain'ny orinasa handrindrana ny fangatahana.
Tsy tompon'andraikitra amin'ny fampahalalana diso nomena ny tranonkala.
Zahao ny Politikanay momba ny tsiambaratelo raha mila fampahalalana bebe kokoa momba ny lalàna mifehy ny tsiambaratelo.
Ity tranonkala ity dia tsy mifamatotra amin'ny lafiny rehetra amin'ny Governemanta India fa tompony manokana ary ny data sy ny atiny rehetra dia manana zon'ny mpamorona sy fananan'ny orinasa tsy miankina iray. Ity tranonkala ity sy ny serivisy rehetra atolotra azy dia voafetra amin'ny fampiasana manokana ihany. Amin'ny alàlan'ny fidirana sy fampiasana an'ity tranonkala ity dia manaiky ny mpampiasa fa tsy hanova, handika, hampiasa indray, na hisintona izay singa ato amin'ity tranonkala ity raha hampiasaina ara-barotra. Ny angona rehetra ary afa-po eto amin'ity tranonkala ity no zon'ny mpamorona.
Ireo mpampiasa an'ity tranonkala ity dia tokony hanaraka ireto fitsipika manaraka ireto amin'ny fampiasana tranokala:
Tsy avelan'ny mpampiasa mandefa hevitra izay mety heverina ho manompa na manafintohina an'ity tranonkala ity, mpikambana hafa, na antoko fahatelo.
Ny mpampiasa dia mety tsy mamoaka, mizara, na mandika izay mety hanafintohina ny besinimaro sy ny fitondran-tena.
Ny mpampiasa dia mety tsy hiditra amin'ny hetsika mety hanitsakitsaka ny zon'ity tranonkala voatokana na fananana ara-tsaina ity.
Ny mpampiasa dia mety tsy manao asa ratsy na asa tsy ara-dalàna.
Raha tsy miraharaha ireo fitsipika etsy ambony ny mpampiasa na miteraka karazana fahasimbana amin'ny antoko fahatelo rehefa mampiasa ny serivisinay, dia tompon'andraikitra amin'izany izy ary tokony hanonitra ny sarany rehetra. Tsy tompon'andraikitra amin'ny fihetsiky ny mpampiasa izahay amin'ny tranga toy izany. Raha sendra misy ny fanitsakitsahana ny Terms sy Conditions ataonay, dia zonay ny mandray fepetra ara-dalàna hanamelohana ilay meloka.
Fanafoanana na tsy fankatoavana ny fangatahana e-Visa India
Ny mpangataka dia voarara tsy handray anjara amin'ireto hetsika manaraka ireto:
Voarara ny mpangataka:
Ampidiro ny mombamomba anao diso.
Manatanteraka na tsy manafatra ireo fampahalalana ilaina mandritra ny fisoratana anarana ho an'i India e-Visa.
Aza hadino na hadisoana na fanovana ireo takelaka fampahalalana ilaina mandritra ny fangatahana ho an'ny India e-Visa.
Raha sendra manao hetsika tsy voarara voalaza etsy ambony ny mpampiasa, dia zonay ny manafoana ny fangatahana visa miandry ny mpampiasa, tsy mankasitraka ny fisoratan'izy ireo ary manala ny kaonty sy ny angon-drakitra manokana an'ny mpampiasa ao amin'ilay tranonkala. Raha efa nankatoavina ny e-Visa karana mpampiasa dia zonay ny hamafana ny mombamomba ny mpangataka amin'ity tranonkala ity.
Momba ny serivisy
Mpanome tolotra fampiharana an-tserasera miorina any Azia sy Oceania izahay ary ny serivisinay dia misy ny fanamorana ny fizotran'ny fampiharana e-Visa ataon'ireo teratany vahiny izay te-hitsidika an'i India. Ny agents anay dia afaka manampy anao amin'ny fahazoana ny fahazoan-dàlana Elektronika momba ny dia na e-Visa avy amin'ny Governemanta India izay homenay anao. Hanampy anao izahay hameno ny fangatahanao, handinika tsara ny valinteninao, handika vaovao, hanamarina ny antonta-taratasy raha diso, feno, tsipelina ary hadisoana amin'ny fitsipi-pitenenana. Azonao atao ny mifandray aminao amin'ny alàlan'ny telefaona na mailaka raha mila fampahalalana fanampiny avy aminao izahay handefasana ny fangatahanao.
Raha vantany vao nahavita ny taratasy fangatahana nomena tamin'ny tranokalanay ianao, dia hanana fotoana hijerena ny fampahalalana nomenao ary hanao fanovana raha ilaina. Aorian'izany dia hahazo bitsika ianao handoa ny serivisinay. Ny fangatahanao ny Visa dia hojeren'ny manam-pahaizana avy eo ary atolotra ho fankatoavana amin'ny Governemanta India. Amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra, ny fangatahanao dia ho voahodina ary raha nekena ao anatin'ny 24 ora latsaka. Raha misy anefa ny pitsopitsony diso na ny antsipiriany tsy hita amin'ny fampiharana dia taraiky.
Fanemorana fotoana fohy ny serivisy
Mety hiato vonjimaika ny tranokala noho ireto antony manaraka ireto:
Fikojakojana ny rafitra.
Raharaha tsy voafehintsika toy ny loza voajanahary, hetsi-panoherana, fanavaozana ny lozisialy sns izay manakana ny fiasan'ny tranonkala.
Ny fahatapahan'ny herinaratra tsy tapaka na afo.
Fiovana eo amin'ny rafi-pitantanana, olana ara-teknika, fanavaozana, na antony hafa mahatonga ny fampiatoana ny serivisy ilaina.
Amin'ny tranga rehetra toy izany dia haato vetivety ny tranokala aorian'ny fanomezana fampandrenesana mialoha ho an'ireo mpampiasa ny tranokala izay tsy tompon'andraikitra amin'ny fahavoazana mety hitranga noho ny fampiatoana.
Fanafahana amin'ny andraikitra
Ny serivisy an'ity tranonkala ity dia voafetra amin'ny fanamarinana sy fandinihana ny antsipiriany momba ny fangatahana fangatahana ho an'ny e-Visa Indiana ary mandefa izany ihany. Ny fankatoavana na ny fandavana ny fangatahana dia miankina tanteraka amin'ny Governemanta India. Ny tranonkala na ny masoivohony dia tsy tompon'andraikitra amin'ny valin'ny fangatahana farany, toy ny fanafoanana na fandavana, noho ny vaovao tsy marina, diso hevitra na tsy hita.
Izahay dia manan-jo hanova na hanao fanovana amin'ny atin'ny Fepetra sy ny fepetra ary ny atin'ny tranokala amin'izao fotoana izao. Izay fanovana rehetra hatao dia hahomby avy hatrany. Amin'ny fampiasana an'ity tranonkala ity dia azonao sy ekenao tanteraka ny hanaraka ny lalàna mifehy sy ny famerana apetrak'ity tranonkala ity, ary manaiky tanteraka ianao fa anjaranao ny mijery ny fiovana rehetra amin'ny Terms sy Conditions na ny atiny.
Lalàna sy Fitsarana azo ampiharina
Ny fepetra sy fehezanteny voalaza etsy ambany dia eo ambanin'ny fehezin'ny lalàna aostralianina. Raha misy ny fizotry ny raharaha ara-dalàna, ny antoko rehetra dia iharan'ny lalàna mitovy amin'izany.
Tsy torohevitra amin'ny fifindra-monina
Manome fanampiana izahay amin'ny fametrahana ny fangatahana ho an'i India Visa. Tsy misy torohevitra mifandraika amin'ny fifindra-monina ho an'ny firenena rehetra.